Tenga Apple Watch mualuminium kana simbi? | Ndinobva mac
Tenga Apple Watch mualuminium kana simbi?
Munguva yezhizha, nekusvika kwekutengesa, kune zvakawanda zvinopihwa zvine chekuita nezvigadzirwa zvatave tichiteedzera mukati megore rese uye zvatisina kusarudza kutenga. Muchikamu chino tiri kuzotaura zvakare zvakare nezvezvino Apple Watch Uye kana zvichinyatso kukosha kuwana chimwe chazvo izvozvi.
Sezvaunoziva, iyo Apple Watch yakabuda mune matatu akasiyana mavhezheni, iyo Sport iyo inogadzirwa ne7000 dzakateedzana aluminium, iyo simbi modhi uye yeGold Edition modhi, iri munyika medu kwete kutengeswa nekuda kwemvumo yekutonga nyaya.
Apple Tarisa SE (GPS, 40 ...
Apple Yekuteedzana 3 ...
Apple Yekuteedzana 6 ...
Kana iwe uchida kuona zvimwe zvinopihwa zveApple Watch, kubatana uku unogona kuwana mamwe mamodheru akachipa pane yepamutemo Apple mutengo.
Chinhu chekutanga chatinofanira kutaura ndechekuti pane zvinoratidza kuti yechipiri vhezheni yeApple Watch ichaunzwa munaGunyana uye saka, nhasi, kana mumwe munhu akandibvunza kana kutenga Apple Watch ndinopindura kuti zviri nani kumirira .
Nekudaro, kune vanhu vazhinji vasinganetse kusave padanho kana zvasvika kumidziyo yeApple uye kana zvirizvo, aya ndiwo mazuva akakwana ekuti uwane mumwe wavo sezvo ivo vakadzikisa mutengo wavo zvakanyanya, zvekuti kune Premium Resellers seBanacacomputer muLas Palmas de Gran Canaria imomo iwe unogona kuwana yemhando yesimbi pamutengo weyaichimbova aluminium imwe.
Mubvunzo wechipiri wandaida kujekesa muchinyorwa chino ndewekuti ndosarudza yealuminium modhi kana modhi inogadzirwa. Mune yangu nyaya, pandakatenga iyo Apple Watch yandinayo izvozvi, rinova iro zuva rimwe chete raakatengesa kuSpain, ndakafunga nezveMitambo modhi munzvimbo yegrey anodized aluminium. Kuti ndikuudze chokwadi, ini ndinoda wachi asi ini ndanga ndine matambudziko neanodizing uye Apple yafanirwa kuchinja wachi yangu kaviri kune imwe nyowani.
Mushure mekuishandisa kweinopfuura gore, ndasvika pamhedziso yekuti ndikatenga imwe mune ramangwana ichave yakagadzirwa nesimbi. Apple Watch payakatengesa kuSpain, ini ndaisakwanisa kuona mamodheru ari mumunhu kuti aite pfungwa dzangu uye ikozvino, pamusoro pemwedzi, pandakaiona muPrimiyamu Reseller yangu, ndakadanana nemhando yesimbi. Yakanyanya kuwanda wachi uye yakakura kupfuura iyo aluminium modhi. Saka ikozvino unoziva, kana uchikwanisa, tenga iyo Apple Watch mune simbi uye kana iwe usine hanya kuti haisi yemhando yechizvino Shanyira chitoro nhasi uye tora mukana wekutengesa kwaChikunguru.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Tenga Apple Watch mualuminium kana simbi?
Zvinoitwa? ndiwo mutsauko here? Chii "chine zvakawanda zvinobata"? uye chinyorwa chapera here?….
Ini handisi kunyatsonzwisisa zvinoreva nyaya yacho futi. Inotaridzika seyokunyepedzera sezvazviri bland.
Ndakaverenga webhu nguva nenguva uye nechinyorwa ichi ndave kushamiswa. Ini ndanga ndichitarisira kuona kuenzaniswa nezviyero, zvishandiso, akasiyana skrini, kuramba kumvura kana kukwenya, ...
Panzvimbo iyoyo ini ndaona kuti iyo simbi vhezheni ine yakawanda "inotakura".
Kutenda nehunhu hwakanaka hwenhau. Ini ndaisakwanisa kugadzira pfungwa dzangu ndisina zvinhu izvi.
Uye sezvo iwe urikutaura nezveVatangiri vePrimiyamu veCanary Islands, ivo havawanzo kuita sarudzo yakanakisa kana tikatarisa mitengo (maererano nebasa, ini handibatanidzwe, nekuti ini handina iyo enzaniso yese), kunze mune zvemari (izvo zvisiri izvo chete) kana mumisangano yakatarwa (seiya yavanowanzoita munaNovember); mune zvimwe zvitoro mitengo inowanzo kuve iri nani.
Ndakave neApple Watch, uye ini ndakasarudza iyo simbi zvakare; Aesthetically ndinoifarira zvakanyanya, iyo skrini haina kukuvadzwa nechinhu chero, kunyangwe iine iyo yekumusoro kuti kune mamaki pane simbi (hazvina kuitika pane iyo aluminium imwe). Uye pakati pe42 ne38, kwandiri zvechokwadi 42.
Ndingadai ndaifarira kuziva kuti matambudziko api awakapihwa anodizing ... ingadai iri poindi yakanaka yekudzivirira iyo simbi uye nekuwedzera info ...
Bazofia nhau akadaro
Iyi webhusaiti ichiwedzera kurasikirwa nehunhu hwayo hwakaderera, zvinonyadzisa nekuti zvisati zvataurwa kuti yaive imwe yeakanakisa mawebhusaiti muSpanish, izvozvi ndizvo chete izvi.
Pindura Bazofia Nhau
Apple inotora 5th mumakomputa anotumirwa muQ2 2016
Vhiki imwe chete ne macOS Sierra 10.12 beta yakaiswa